Iibinta ugufiican 15 midab wajiga kartoonka wajiga qurxinta qurxinta wajiga wajiga.
Midka koowaad15 Palette Eyeshadow Palette, oo ay ku jiraan Glitter, Matte, Shimmer, Mettallic, eyeshadows Iridescent. Midabada hodanka ah ee doorashada.
Qalabkan indha-sarcaadka leh wuxuu leeyahay 15 nooc oo hooskii indhaha diiran ah, oo ku habboon in lagu isticmaalo maalinta ama ciyaarta. Isticmaal buraashka ishaada jacaylka ah si aad u abuurto caadadaada geesinimo leh ama muuqaal aad u xeel dheer, kuna habboon munaasabad kasta.
Labada hore:Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo hooska indhaha ah. Tayada alaabtayada waxaa lala barbardhigi karaa noocyo badan oo waaweyn, xitaa ka sii wanaagsan. Fadlan naso inaad hubiso inaad iibsato alaabtayada. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan alaabooyinka la helay, waxaan joogi doonnaa adeeggaaga wakhti kasta.
Saddexda hore:Palette Eyeshadow Pa aadka leh, budada waa mid siman oo hodan ku leh midabka. Fudud isku qasid iyo waaritaan dheer. Qurxintaada hayso maalinta oo dhan.
Budada Hooska Indhaha ee Tayada Sare: Kalluumeysigayaga indha-sarre ee indha-sarcaadkeedu aad u jilicsan yahay oo aad u midab-badan, biyo-mareeno, ductility aad u fiican, adhesion xoog leh. Eyeshadow fududahay in la lakulmo oo la isku daro, matte iyo midab qurux badan oo midab leh
Duurjoogta la Isticmaalay & Muddo Dheer Samee Palette: Ku habboon munaasabadaha kala duwan, sida kuwa aan caadiga ahayn, saloon, xaflad, aroos. Caafimaad iyo maaddooyin aamin ah iyo tayo wanaagsan. Waxaa la marin karaa bushimaha sare, wejiga, lugaha iyo jirka.
Afarta hore:15ka midab ee hooska isha ayaa ah hubkaaga qarsoodiga ah si aad u abuurto qurxin indhaha oo qumman. Qurxinta indhaha quruxda badan waxay kaa dhigeysaa mid soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh, waxayna sare u qaadi kartaa isku kalsoonaantaada.
15 caan ah Eyeshadow: iyadoo la adeegsanayo 15 midab oo caan ah si loo abuuro muuqaal aan dhammaad lahayn, qabow iyo cajiib ah. Way fududahay in la isku daro oo la isku daro kareemada, dharka jilicsan, midabada jilicsan iyo kuwa jilicsan ee munaasabadaha kala duwan iyo dhammaan xagaagaaga.
Ku raaxayso saamaynta midabaynta dheer ee super: Midab sare, midab waara oo dheer, ma fududa in la tuuro oo la duulo budada. Waxay socon kartaa maalin dhan si ay kuu siiso waayo-aragnimo raaxo leh oo aad u haysato qurxinta indhaha hooska ugu habboon.
Midabaynta super, jilicsanaanta iyo jilicsanaanta: midabka kareemka iyo midabka jilicsan ee caanka ah wuxuu abuuraa muuqaal badan oo cajiib ah! Maaddooyinka caafimaadka iyo badbaadada, tayo sare leh, waxay abuuraan indho qurxin indhaha ah, midab macquul ah oo hufan oo isku dhafan, waxay indhaha ka dhigaan kuwo muuqaal leh oo ka buuxa saddex-cabbir.
Hooska milicsiga: casaan, dhalaalaya, champagne, iyo dahab isku dar ah si ay u siiso iftiin aad u sarreeya, dhalaalaya labada-chromatic, sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa hooskeenna keligaa. Waa isku dheelitirnaan qurux badan oo qabow iyo diiran.
Hore: Qurxinta indhaha-BD9-C
Xiga: Qurxinta indhaha-BD15-COOL
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Burushka ugu Fiican, Lipstick yar, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Matte Eyeshadow Palette, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Liimiga Shimmer, Dhammaan Alaabooyinka